2013 May | MoeMaKa Burmese News & Media
စိန့်မေရီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက် တောင်းပန်ပြီဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ရန်ကုန်မြို့ စိန့်မေရီဘုရားကျောင်းတွင် တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသူ ရဲတိုက်သည် အာဏာပိုင်တို့၏ ထိန်းသိမ်းခံရခြင်းမှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ဘုရားကျောင်းသို့ သွားရောက်ပြီး တောင်းပန်ခဲ့သည်။ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်သည် သာသနာတော်ညိုးနွမ်းအောင်...
Stop extremist violence attack … (Tu Maung Nyo)
ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှု ဝိုင်းဝန်း ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြပါစို့ တူမောင်ညို (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက် ) မြေပြန့်/တောင်ပေါ်မခွဲ အကြမ်းဖက်၊ မီးရှို့၊ လူသတ်မှုတွေက ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ပုံစံထဲပဲ။ ပစ်မှတ်နဲ့...
၀မ်းတွင်းရူးတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ တုိုင်းပြည် ကာတွန်း – စောငုို မေ ၃၁၊ ၂၀၁၃
ဘက်စုံ ထူးချွန်သော ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဘဂျမ်း သန်းဝင်းလှိုင် မေ ၃၁၊ ၂၀၁၃ မြန်မာကာတွန်းလောကတွင် ကာတွန်းရွှေတလေး၊ ဦးဟိန်စွန်းနှင့် ဦးဘဂျမ်းတို့သည် စစ်ကြို ခေတ်က ထင်ရှားခဲ့သော ကာတွန်းဆရာကြီးများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သုံးဦးသည် ခေတ်ပြိုင် ကာတွန်း...
လျှပ်စစ်နှင့် လောင်စာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တရုတ်ပြည် နမူနာယူနေသော မြန်မာ ဇော်အောင် (မုံရွာ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ● တရုတ်ပြည်မကြီး လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုသမိုင်း လျှပ်စစ်သုံးနိုင်မှ လူများဝင်ငွေတိုးပွား၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုများမှ လွတ်မည်ဟု အကြမ်းဖျင်းပြောနိုင်သည်။...
Nyein Chan Aye – Depeyin Masscare … impossible justice ….
ဗမာပြည်အတွက် ဆဋ္ဌမမြောက် ဒုလ္လဘတရား ငြိမ်းချမ်းအေး၊ မေ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ဒီနေ့ ဒီပဲရင်း အုပ်စုဖွဲ့ လူသတ်၊ ရမ်းကား၊ ပစ္စည်းလု ဒုစရိုက်မှုကြီး (၁၀) နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့..။ ဒီ (၁၀) နှစ်အတွင်းမှာ...
Leçon 11 (Lesson 11 ) – Learning French
ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၁၁) ပါရီမောင်၊ မေ ၃၁ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ်စဉ် တက်ဆက်မည်) (မိုးမခ၏ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် အပတ်စဉ်ပြတ်တောက်ခြင်းကို ခွင့်လွှတ်ပါ) Leçon 11 ...
Saw Ngo – Unfinished Business …
စောငို – မပြီးဆုံးသေးသော ပန်းချီကား မေ ၃၁၊ ၂၀၁၃
Editor’s Notes – (22)
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၂၂) ကိုမျိုး၊ မင်းကျော်ခိုင်၊ မိုးမခ၀ိုင်းတော်သားများ၊ ချစ်သူများအတွက်လက်ဆောင် မောင်ရစ်၊ မေ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ကိုမျိုးက ၈၈မျိုးဆက်တွေရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ပိုစတာတွေ ဒိုင်ခံဆွဲပေးတယ်။ ကိုမင်းကျော်ခိုင်က သူတို့အတွက် အမှတ်တရ စကက်ခ်ျလေးဆွဲပေးတယ်။...
၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် ၂ ဦး ဆန်ဖရန်လေဆိပ်ကုို ဆိုက်ရောက်၊ ဇွန် ၁ မှာ လူထုနဲ့တွေ့မည် SF Burmese Community Organizers & Friends ။ မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊...
ကူမိုးကြိုး – သူမသာ၊ ကိုယ်အသုဘ ဆိုပါလား မေ ၃၀၊ ၂၀၁၃
Thet Khaing – Poem
သိက္ခာဆိုတဲ့တရား လူသိများလာတဲ့တနေ့ သက်ခုိုင် မေ ၃၀၊ ၂၀၁၃ သိက္ခာဆိုတဲ့တရား လူသိများလာတဲ့တနေ့ သားတို့ ပြန်လာပါရစေအမေ။ ရွှေရင်မှာပွင့်ဖူး သားချစ်ဦးအတွက် အမေငိုလည်းငို အိုလည်းအိုပေါ့။ ငွေရတု(၂၅နှစ်)နဲ့ရင်းရတဲ့သား ဘာလို့များပြန်မတွေ့ပါလိမ့် အမေရင်ထိတ်နေမိမယ်။ အမေ့ကိုသား ပြောထားခဲ့ပြီးပဲအမေရယ်...
ညဏ်ကြီးရှင် ကာတွန်း – လုိုင်လုဏ် မေ ၃၀၊ ၂၀၁၃
Bo Dar – Articles
ဒီပဲယင်းက ညွှန်ပြခဲ့တဲ့လမ်း ဗုိုလ်ဓား မေ ၃၀၊ ၂၀၁၃ မေ ၃ဝ မှာ အစိုးရကလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အကြမ်းဖက်မှုကြီးတခု မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာ အားလုံးသိကြပြီးပါပြီ။ ကျနော်တို့အမြင်က … ဒီပဲယင်းကိစ္စဟာ သာမန်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု မဟုတ်ပါ၊...
Linn Nwe Eain – Poem
၂ဝဝ၃ ဒီပဲယင်းဒဏ်ရာ လင်းနွေးအိမ် မေ ၃၀၊ ၂၀၁၃ တနွေလုံး အပူဒဏ်ကြိတ်ခံပြီး မိုးဦးမိုးစက်တွေစောင့်နေတဲ့ ယာခင်းခမြာ သွေးတွေသာလွှမ်းခဲ့ရ အဓမ္မညပါလား။ ကြည့်လိုက်စမ်း အငမ်းမရကိုက်ဖဲ့ အမှောင်နက်နက်ထဲက ချွန်ထက်နေတဲ့အစွယ်ငေါငေါတွေ အဇာတသတ်ဇာတ်ခင်း ဒါ——ဒီပဲယင်း ၂ဝဝ၃။...
ကာတွန်း စောငို – ပြင်ဖို့ကတော့ ရယ်ဒီပဲ … မေ ၂၉၊ ၂၀၁၃
ဗဲင်းဆင့်ဗဲန်ဂိုးလ်နှင့် မကြားတကြား ..အင်တာဗျူးခြင်း ဆောင်းလူ မေ ၂၉၊ ၂၀၁၃ ညက မိုက်ခရိုဖုန်းလေး ရင်ဘတ်ထောက်ပြီး … ဗဲင်းဆင့်ဗဲန်ဂိုးလ်နဲ့ မကြားတကြား … အင်တာဗျူးမိတယ် … ဗားရှင်းတွေအမျိုးမျိုးခွဲရင်း အခိုးခံလိုက်ရတဲ့ နူနွင်မြို့ကလေးရဲ့...